“Wuxuu cabi jiray KHAMRIGA iyo DAROOGADA isagoona iska diiday Kubbada Cagta iyo Iskuulka.” – QISO ku saabsan saxiixa cusub ee Chelsea Hakim Ziyech – Gool FM
(Netherlands) 16 Feb 2020. Chelsea ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigtay xiddiga reer Morocco iyo Naadiga Ajax ee Hakim Ziyech kaddib markii ay miiska saartay adduun dhan 33 milyan oo bound.
Hakim Ziyech oo ay iska dhaleen Hooyo Hollandees ah iyo Aabe Morroccan ah ayaa wuxuu yaraan u yahay reer ka kooban 9-ruux.
Balse aqrista ma ogtahay in Hakim uu nolosha ka dhacay isagoo 10-jir ah kaddib markii uu geeriyooday Aabihii.
Nolosha ayaa ku adkeyd Hakim maadaama uu aabihii la dhibtoonayay cudur ku dhaca dareemaha neerfaha.
“Cudurkaas ayaa burburiyay Aabahey. Waxba ma sameyn karin, ma socon karin, ma hadli karin waxna ma cuni karin,” Saxiixa cusub ee Chelsea ayaa sidaa mar u sheegay Jariiradda De Volskrant ee ka soo baxda dalka Holland.
“Horey wuxuu u qabay wadno xanuun, si adag ayuu u shaqeenayay aadbuuna Sigaarka u cabayay.”.
December 2013 waxaa dhacday tii ugu xumeyd, Hakim oo u warmaya Algemeen Dagblad ayaa yiri:
“Aabahey wuxuu jiifay sariir tiilay qolka fadhiga. Waqti buu xanuunsanaa.
“Habeenkaa waxay ahayd inaan jiifto, laakiin waxaan doonay inaan isaga la joogo. Markii dambe waxaan ku gam’ay sariirtiisa.
“Saqdii dhexe ayaan soo toosay waxaana aaday qolkeyga jiifka oo kor ku yiilay.
“Saacado yar uun kaddib abaarihii 3-da waxaan hoos ka maqlay oohinta iyo baroorta reerkeyga.
“Qolka fadhiga Ayaan soo aaday mise Aabehey ayaa dhintay waliba anigoo 10-jir ah.”.
Geerida ku timid Aabihii ayaa aad u saameysay Hakim Ziyech wuxuuna yiri:
“Iskuul ma aadeyn, kubbada cagtana wax micno ah iima lahayn, gabi ahaanba waan lumay.”.
Nasiib wanaag waxaa noloshiisii bad-baadiyay Aziz Doufikar oo ahaa laacib soo maray xulka qaranka Morrocco, isla markaana ahaa laacibkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Woqooyinka Afrika ee ka ciyaara horyaalka dalka Holland.
Aziz Doufikar oo ka sheekeenaya sidii u bad-baadiyay waayaha ciyaareed ee Hakim ayaa yiri:
“Markii uu Aabihii geeriyooday, gabi ahaanba lama xakameyn karin Hakim, Qamriga ayuu cabayay, Sigaarka buu cabayay sidoo kale wuxuu isticmaalayay Daroogada.
“Sidii ugu fiicneyd oo aan awooday ayaan ku caawiyay isaga si aan uga weeciyo wadada xun, waxaana ahaa la taliyihiisa, Aabihii iyo Tababarihiisa.
“Wuxuu ka cabsanayay inuu nafsadiisa ku muujiyo garoomada kubbada cagta.
“Waxaan u ogolaaday inuu ciyaaro dhowr tartamo intaa kaddibna si fudud ayaan u arkay isagoo isbadel sameenaya.
“Xoogaa nasiib kaddib way shaqeysay, Hakim gabi ahaan wuu bullaalay.”.
Hakin oo wadada saxda ah dib u helay ayaa markii uu 14-jirsaday ku biiray Heerenveen isagoona halkaa u guuray si uu ula noolaado qoys kale.
Kaddib markii uu saftay kulankii ugu horreeyay ee waa wayn isagoo 19-jir ah ayuu dabadeed ku biiray FC Twente.
Wuxuu u soo ciyaaray xulka Holland ee 19-jirada inkastoo markii dambe doortay inuu u safto xulka Morrocco.
Iminka, waxa la sugaba waa wacdaraha uu 26-sano jirkaan ka dhigi doono garoonka Stamford Bridge iyo guud ahaan horyaalka Premier League.